ဝန်ထမ်းတွေ ဂုဏ်ယူရတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါစေ - ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟ
လက်ရှိရေပန်းစားနေတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဇာတ်ကား Justice League ရဲ့ ကြော်ငြာမှာ ရေးထားတာလေး သဘောကျမိတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ‘You cannot save the world alone’ ဆိုတာပါ။ ကမ္ဘာကြီးကို မင်းတစ်ယောက်တည်း ကယ်တင်လို့မရဘူးတဲ့။ တကယ့်ကို Superhero တွေလို့ ပြောရမယ့်သူတွေတောင် ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ဖို့ ပေါင်းစည်းရသေးတယ်ဆိုပြီး ရိုက်ပြထားတယ်။ တကယ့်အပြင်က လူတွေဆို ပိုဆိုးတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ Superhero တွေ မဟုတ်ကြဘူး။ လူသားတွေဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ မှားနိုင်တယ်၊ လွဲနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ပေါင်းစည်းရမယ်။ အပြန်အလှန်ထောက်ကူရမယ်။ မတူညီမှု (Diversity) ရဲ့အားကို ယူရမယ်။ မဟုတ်ရင် ဘယ်လောက်ပဲ တော်နေပါစေ၊ တစ်ယောက်တည်း လုပ်နေရတယ်၊ လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သေချာတယ်၊ သူဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ထောင်တက်လာစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ကမ္ဘာမှာလည်း ကြည့်လိုက်ပါ၊ လီကွမ်ယု နာမည်ကျော်ပေမယ့် သူတစ်ယောက်တည်းအားနဲ့ စင်ကာပူကို ဆွဲတင်သွားတာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့နောက်မှာ လူတော်အစုအဖွဲ့ ရှိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတစ်ယောက်တည်းအားနဲ့ လွတ်လပ်ရေးယူသွားတာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့နောက်မှာ လူတော်အစုအဖွဲ့ ရှိတယ်။ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး ဘာပဲလုပ်လုပ် လူတော်တွေ၊ ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေ ရှိနေဖို့လိုသလို၊ အဲဒီလိုရှိနေအောင် ခေါင်းဆောင်တွေဘက်က လုပ်ဆောင်ရမှာတွေ ရှိပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ Branding နဲ့ပတ်သက်ပြီး တော်တော်လေး ပြောလာကြတာ သတိထားမိမှာပါ။ ကိုယ့်နာမည်ကြားလိုက်တဲ့ လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုပေါ်လာသလဲ၊ အဲဒါသည် ကိုယ့်ရဲ့ Brand ပါပဲ။ အဲဒီလို ပုံရိပ်တစ်ခုပေါ်လာအောင် ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေ၊ ပြောနေတဲ့စကားတွေ၊ တွေးနေတဲ့အတွေးတွေက လုပ်ဆောင်ပေးတယ်။ အဲဒီလို တည်ဆောက်တာကိုတော့ Branding လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဒီလိုပဲ၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ အစိုးရဌာနတစ်ခုမှာလည်း Brand ဆိုတာ ရှိတယ်။ ဒါကို စနစ်တကျ တည်ဆောက်ထားနိုင်ရင် ကိုယ့်ဆီက ၀န်ထမ်းတွေဟာ အဖွဲ့အပေါ် အထင်ကြီးမယ်။ ဒီအဖွဲ့သားဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်ယူမယ်။ အမြဲတက်ကြွနေမယ်။ အလုပ်မြဲမယ်။ ကိုယ်သွားတဲ့ပန်းတိုင်နောက်ကို သူတို့လည်း ပါလာမယ်။ လူတော်တွေ ထပ်ဝန်းရံလာမယ်။ အဲဒီလို Employer branding ကောင်းကောင်းလုပ်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်တွေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားဖို့ လိုပါမယ်။
၁။ ခေါင်းဆောင်က ဘယ်သူလဲ (Who is your leader?)
ကျွန်တော် NGO အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တုန်းကပေါ့။ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းက Low profile နဲ့နေပါတယ်။ သူ့လုပ်ငန်းတွေကို သိပ်လူသိမခံဘူး။ ဒီတော့ အပြင်လူတွေကြားထဲမှာ နာမည်သိပ်မထွက်ဘူး။ ကျွန်တော် အခမ်းအနားတခုခုသွားလို့ ဘယ်မှာ အလုပ်လုပ်လဲ မေးခံရတိုင်း အဖွဲ့နာမည် ထုတ်ပြောလို့ရှိရင် တော်တော်များများက မသိကြတာ များတယ်။ နောက်တော့ အဖွဲ့နာမည် မပြောတော့ဘဲ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ Country Director ဆရာနာမည်ကိုပဲ ပြောလိုက်တယ်။ ဆရာကတော့ အင်မတန်တော်ပြီး လူတကာလေးစားသူမို့ သူ့နာမည်တော့ တော်တော်များများက သိကြတယ်။ သြော် ဒီဆရာရဲ့ အဖွဲ့ကလား ဆိုပြီး တလေးတစားဖြစ်သွားကြတယ်။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီလိုဆရာ ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့မှာ လုပ်ရတာကို ဂုဏ်ယူတယ်။ ဒီလိုဆရာရဲ့ တပည့်ဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်ယူတယ်။ လစာနည်းတယ်ဆိုဦးတော့၊ ကျွန်တော် ဒီိမှာလုပ်ရတာ ပျော်တယ်။ ဘောလုံးသမားတွေဆို ကြည့်ကြည့်ပါ၊ ဘယ်နည်းပြရှိလို့၊ သူ့ဆီကနေ သင်ယူချင်လို့ ဒီအသင်းကို ပြောင်းလာတာ ဆိုတာမျိုး မကြာခဏ ကြားနေရပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ခေါင်းဆောင်ပြောင်းသွားလို့ ဒီခေါင်းဆောင်နဲ့အတူတူ တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားက ပြန်ရောက်လာတဲ့ ပညာတတ်တွေကိုလည်း မြင်ဖူးကြမှာပါ။ ဒါတွေဟာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူရဲ့ Personal brand ကြောင့် လူတော်တွေကို စည်းရုံးနိုင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းရဲ့ ဥပမာတွေပါပဲ၊ ဒါကြောင့်မို့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ဦးဆောင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟာ အရည်အချင်းရှိဖို့၊ Brand image ကောင်းဖို့၊ လူတွေ လေးစားရသူဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ Leading by example ဆိုသလို ခေါင်းဆောင်ဟာ အမြဲရှေ့ဆောင်လမ်းပြ ဖြစ်ရမယ်။ နောက်လိုက်တွေအတွက် စံနမူနာ ဖြစ်ရမယ်။ ကိုယ်တောင် မလိုက်နာနိုင်တဲ့စည်းကမ်းကို ထုတ်ထားလို့မရဘူး။
၂။ တန်ဖိုးထားမှုနဲ့ အကျိုးပြုမှု (Value & Contribution)
ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာ ဘယ်လိုတန်ဖိုးထားမှုတွေ ရှိသလဲ။ ဥပမာအားဖြင့် Customer ကို အလေးထားတာလား၊ အမြတ်နည်းရင် နည်းပါစေ၊ ရှုံးရင်ရှုံးဦးတော့ Customer တွေ အကျိုးယုတ်မယ့်ကိစ္စ ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး ဆိုတာမျိုး၊ ဒီအသင်းက အနိုင်ရရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေး နောက်ဆုံးမိနစ်ထိ ရေကုန်ရေခန်း ကစားတတ်တဲ့ ဘောလုံးအသင်း၊ ငါတို့က အစိုးရ၀န်ထမ်း မဟုတ်ဘူး၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း၊ ပြည်သူအဆင်ပြေစေဖို့ အလုပ်လုပ်နေတာ စသဖြင့် ဒီလိုတန်ဖိုးထားမှုတွေက ၀န်ထမ်းတွေကို ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းအပေါ် ဂုဏ်ယူစေပါတယ်။
နောက်ပြီး အမှန်တရားကို တန်ဖိုးထားပြီး ပြည်သူ့အကျိုးကိုပဲ ကြည့်တဲ့မီဒီယာ၊ ငွေကြေးအလွဲသုံးစား မလုပ်ဘဲ တကယ်လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေအထိ သွားရောက်ကူညီပေးနေတဲ့ NGO အဖွဲ့၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း အခွန်အဆောင်ဆုံး နံပါတ်တစ် လုပ်ငန်း၊ လူမှုတာဝန်သိခြင်း (Corporate Social Responsibility) ဆိုတဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ လူမှုရေးလုပ်ဆောင်မှုတွေ လုပ်တာ၊ ဒီလို ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်၊ ပြည်သူအများအတွက် လုပ်ဆောင်နေတာတွေအကုန်လုံးဟာလည်း ကိုယ့်အဖွဲ့ဟာ ဘယ်လိုမျိုးဆိုတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ အဖွဲ့ရဲ့ ထိရောက်မှု (Organization effectiveness)
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အလုပ်မဖြစ်၊ အလုပ်တွေ မပြီးမြောက်၊ မအောင်မြင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းမျိုးမှာ ဘယ်သူမှ အလုပ်မလုပ်ချင်ပါဘူး။ လုပ်နေရလည်း စိတ်ဓါတ်တက်ကြွမှု ရှိမယ်မဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့ဆိုတော့ ဒီလိုအလုပ်မဖြစ်ရင် ဘယ်တော့များ ကုမ္ပဏီပြုတ်သွားမလဲ ဆိုပြီး စိတ်ပူပန်နေရမှာကိုး။ ဆုဖလားဆွတ်ခူးနိုင်ချေ မရှိတဲ့ အသင်းက ဘယ်လိုနာမည်ကျော်ကစားသမားကိုမှ ခေါ်လို့မရသလိုပါပဲ။ တကယ်တော့ ၀န်ထမ်းကောင်းမှ အဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေ ထိရောက်မှာဆိုပေမယ့်လည်း အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေထိရောက်လေလေ၊ အဖွဲ့က ပိုအောင်မြင်လာလေလေ၊ တော်တဲ့သူတွေကို ပိုမိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာ ဖြစ်သလို၊ တခြားတော်တဲ့သူတွေကိုလည်း စည်းရုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ အဖွဲ့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု (Organization culture)
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ ဘာလဲ။ အမေအရွယ်ဆို အမေ၊ အစ်ကိုအရွယ်ဆို အစ်ကို၊ ဘယ်သူမှ နာမည်ကို အရင်းအတိုင်း မခေါ်ဘူး။ လူကြီးရှေ့က ဖြတ်ရင် ခေါင်းငုံ့သွားတယ်။ ထမင်းဝိုင်းမှာ အသက်အကြီးဆုံးကို ဦးချပြီးမှ စားတယ်။ ဒါတွေဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာတွေပဲ။ ဒါကြောင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဘယ်လိုဆက်ဆံကြသလဲ ဆိုတာကို ပြသခြင်းဖြစ်တယ်။ Organization culture ဆိုတာလည်း ဒါပါပဲ။ အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေကြသူအချင်းချင်း ဘယ်လိုပြောဆိုဆက်ဆံကြသလဲ။ တချို့က မိသားစုလို ဆက်ဆံတယ်။ ခြေထိုးတာ၊ မကောင်းပြောတာ နည်းတယ်။ တချို့အဖွဲ့တွေမှာက လွတ်လပ်တယ်။ ရုံးတက်ချိန်၊ ဆင်းချိန်ကအစ တအားချုပ်ထိန်းမထားဘူး။ ဘာလို့ဆိုတော့ လုပ်ငန်းသဘာဝက Creativity ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို ပိုလိုအပ်တာမို့ ဒါမျိုးထားတာ။ တချို့အဖွဲ့တွေ အလုပ်ဖြစ်ဖို့ကိုပဲ ဦးစားပေးတယ်။ အားလုံးက အလုပ်ကို တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ကြရတယ်။ မလုပ် မရှုပ် မပြုတ် ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ လူတွေအတွက် ဒီအဖွဲ့မှာ နေရာမရှိဘူး။ အဲဒီလိုယဉ်ကျေးမှု (Culture) တွေက တကယ်တော့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ Brand ဖြစ်သလို၊ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းမှာ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေပဲ အံဝင်မယ်ဆိုတာကို ပြသနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ အဖွဲ့သားတွေကို တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း (Developing the employees)
ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာ လုပ်သွားတဲ့သူက တခြားတစ်နေရာမှာ ပိုမြင့်တဲ့ရာထူး ရသွားတယ်။ ဒီခေါင်းဆောင်က သူနဲ့တွဲလုပ်တဲ့သူတိုင်းကို ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်လာအောင်၊ ၀န်ထမ်းဘ၀ တစ်ဆင့်ထက်တစ်ဆင့် တက်လာအောင်၊ Career progression ဖြစ်လာအောင် ပျိုးထောင်ပေးနိုင်တယ်။ ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးဆို အလုပ်ဝင်ချင်တဲ့၊ လာပြီး သင်ယူချင်တဲ့ လူငယ်တွေအများကြီး ဖြစ်နေမှာအမှန်ပါပဲ။ ဂျက်မားပြောသလိုပဲ၊ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာ လစာ ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာထက် မင်းအလုပ်လုပ်ပေးရမယ့်ဘော့စ် ဘယ်သူလဲ ဆိုတာက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ တွေ့လိုက်တယ်၊ ကိုယ့်ဘ၀ကို အကြံဉာဏ်ကောင်းပေးပြီး လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မယ့် mentor ကောင်းနဲ့ တွေ့လိုက်တယ်ဆို ဒါဟာ ကိုယ့်အတွက် တက်လမ်းတစ်ခု ရသွားမှာမို့လို့ပါပဲ။
ဆောင်းပါးအဆုံးသတ်အနေနဲ့ ကျွန်တော် တအားသဘောကျတဲ့ စကားလေးတစ်ခု ဝေမျှလိုတယ်။
အထင်ကြီးလေးစားခံရမှုဟာ စွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အစည်းအဝေးတွေမှာ လူလေးစားခံရသူတစ်ယောက် ပြောတဲ့စကား အင်မတန်သက်ရောက်မှုကြီးတယ်။ အားလုံးက ခေါင်းညိမ့်တယ်။ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာ လူလေးစားခံရသူတစ်ယောက် ပေးတဲ့အကြံ လူတကာလက်ခံတယ်။ ချတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် ကန့်ကွက်သူ တအားနည်းတယ်။ နောက်က လိုက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြတယ်။ ဒီတစ်ယောက် ပြောတုန်းက ၀ိုင်းရှုံ့ချခဲ့တဲ့ စကားတွေကိုပဲ နောက်တစ်ယောက်ကပြောတဲ့ ၀မ်းသာအားရ လက်ခုပ်တီးနေကြတယ်။ ဒါတွေဟာ Reputation ရဲ့ ပါဝါတွေပဲဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း ဒီလိုပါပဲ။ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူက ဘယ်လိုလူလဲ၊ အဖွဲ့အစည်းမှာ ဘယ်လိုတန်ဖိုးထားမှုတွေ ရှိသလဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အများပြည်သူကို ဘယ်လောက်ထိ အကျိုးပြုနေသလဲ၊ ဘယ်လောက်အောင်မြင်တဲ့ အဖွဲ့လဲ၊ ကိုယ့်အဖွဲ့သားတွေကို ဘယ်လောက်ထိ ပျိုးထောင်ပေးနိုင်သလဲ ဆိုတာတွေက ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းအပေါ် အထင်ကြီးလေးစားမှု (Reputation) ရစေမှာပါ။ ဒါကြောင့် အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဌာနတွေအနေနဲ့ ဒီအချက်တွေကို သေချာပြင်ဆင်ပြီး ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ Brand ကို သေချာတည်ဆောက်ထားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
၀န်ထမ်းတွေက ဒီအဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားပြုရတာကို ဂုဏ်ယူနေတယ် ဆိုတဲ့နေ့ဟာ ကိုယ့်အဖွဲ့ အောင်မြင်တဲ့နေ့ပါပဲ။
လကျရှိရပေနျးစားနတေဲ့ ကမ်ဘာကြျောဇာတျကား Justice League ရဲ့ ကွျောငွာမှာ ရေးထားတာလေး သဘောကမြိတယျ။ ဘာလဲဆိုတော့ ‘You cannot save the world alone’ ဆိုတာပါ။ ကမ်ဘာကွီးကို မငျးတဈယောကျတညျး ကယျတငျလို့မရဘူးတဲ့။ တကယျ့ကို Superhero တှလေို့ ပွောရမယျ့သူတှတေောငျ ကမ်ဘာကွီးကို ကယျတငျဖို့ ပေါငျးစညျးရသေးတယျဆိုပွီး ရိုကျပွထားတယျ။ တကယျ့အပွငျက လူတှဆေို ပိုဆိုးတာပေါ့။ ကြှနျတျောတို့အားလုံးဟာ Superhero တှေ မဟုတျကွဘူး။ လူသားတှဖွေဈတယျ။ ဒီတော့ မှားနိုငျတယျ၊ လှဲနိုငျတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ ပေါငျးစညျးရမယျ။ အပွနျအလှနျထောကျကူရမယျ။ မတူညီမှု (Diversity) ရဲ့အားကို ယူရမယျ။ မဟုတျရငျ ဘယျလောကျပဲ တျောနပေါစေ၊ တဈယောကျတညျး လုပျနရေတယျ၊ လုပျနတေယျဆိုရငျတော့ သခြောတယျ၊ သူဦးဆောငျတဲ့ အဖှဲ့အစညျးဟာ ဘယျလိုနညျးနဲ့မှ ထောငျတကျလာစရာ အကွောငျးမရှိဘူး။ ကမ်ဘာမှာလညျး ကွညျ့လိုကျပါ၊ လီကှမျယု နာမညျကြျောပမေယျ့ သူတဈယောကျတညျးအားနဲ့ စငျကာပူကို ဆှဲတငျသှားတာ မဟုတျဘူး။ သူ့နောကျမှာ လူတျောအစုအဖှဲ့ ရှိတယျ။ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးတဈယောကျတညျးအားနဲ့ လှတျလပျရေးယူသှားတာ မဟုတျဘူး။ သူ့နောကျမှာ လူတျောအစုအဖှဲ့ ရှိတယျ။ ဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ဟာ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုငျငံရေး ဘာပဲလုပျလုပျ လူတျောတှေ၊ ယုံကွညျရတဲ့သူတှေ ရှိနဖေို့လိုသလို၊ အဲဒီလိုရှိနအေောငျ ခေါငျးဆောငျတှဘေကျက လုပျဆောငျရမှာတှေ ရှိပါတယျ။
ဒီနခေ့တျေမှာ Branding နဲ့ပတျသကျပွီး တျောတျောလေး ပွောလာကွတာ သတိထားမိမှာပါ။ ကိုယျ့နာမညျကွားလိုကျတဲ့ လူတှရေဲ့စိတျထဲမှာ ဘယျလိုပျေါလာသလဲ၊ အဲဒါသညျ ကိုယျ့ရဲ့ Brand ပါပဲ။ အဲဒီလို ပုံရိပျတဈခုပျေါလာအောငျ ကြှနျတျောတို့ နစေ့ဉျလုပျနတေဲ့အလုပျတှေ၊ ပွောနတေဲ့စကားတှေ၊ တှေးနတေဲ့အတှေးတှကေ လုပျဆောငျပေးတယျ။ အဲဒီလို တညျဆောကျတာကိုတော့ Branding လို့ချေါပါတယျ။
ဒီလိုပဲ၊ ကုမ်ပဏီတဈခု၊ အဖှဲ့အစညျးတဈခု၊ အစိုးရဌာနတဈခုမှာလညျး Brand ဆိုတာ ရှိတယျ။ ဒါကို စနဈတကြ တညျဆောကျထားနိုငျရငျ ကိုယျ့ဆီက ၀နျထမျးတှဟော အဖှဲ့အပျေါ အထငျကွီးမယျ။ ဒီအဖှဲ့သားဖွဈရတာကို ဂုဏျယူမယျ။ အမွဲတကျကွှနမေယျ။ အလုပျမွဲမယျ။ ကိုယျသှားတဲ့ပနျးတိုငျနောကျကို သူတို့လညျး ပါလာမယျ။ လူတျောတှေ ထပျဝနျးရံလာမယျ။ အဲဒီလို Employer branding ကောငျးကောငျးလုပျထားခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီအခကျြတှေ ထညျ့သှငျးစဉျးစားထားဖို့ လိုပါမယျ။
၁။ ခေါငျးဆောငျက ဘယျသူလဲ (Who is your leader?)
ကြှနျတျော NGO အဖှဲ့အစညျးတဈခုမှာ အလုပျလုပျတုနျးကပေါ့။ အဲဒီအဖှဲ့အစညျးက Low profile နဲ့နပေါတယျ။ သူ့လုပျငနျးတှကေို သိပျလူသိမခံဘူး။ ဒီတော့ အပွငျလူတှကွေားထဲမှာ နာမညျသိပျမထှကျဘူး။ ကြှနျတျော အခမျးအနားတခုခုသှားလို့ ဘယျမှာ အလုပျလုပျလဲ မေးခံရတိုငျး အဖှဲ့နာမညျ ထုတျပွောလို့ရှိရငျ တျောတျောမြားမြားက မသိကွတာ မြားတယျ။ နောကျတော့ အဖှဲ့နာမညျ မပွောတော့ဘဲ ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့ရဲ့ Country Director ဆရာနာမညျကိုပဲ ပွောလိုကျတယျ။ ဆရာကတော့ အငျမတနျတျောပွီး လူတကာလေးစားသူမို့ သူ့နာမညျတော့ တျောတျောမြားမြားက သိကွတယျ။ သွျော ဒီဆရာရဲ့ အဖှဲ့ကလား ဆိုပွီး တလေးတစားဖွဈသှားကွတယျ။
အဲဒီတော့ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ ဒီလိုဆရာ ဦးဆောငျတဲ့အဖှဲ့မှာ လုပျရတာကို ဂုဏျယူတယျ။ ဒီလိုဆရာရဲ့ တပညျ့ဖွဈရတာကို ဂုဏျယူတယျ။ လစာနညျးတယျဆိုဦးတော့၊ ကြှနျတျော ဒီိမှာလုပျရတာ ပြျောတယျ။ ဘောလုံးသမားတှဆေို ကွညျ့ကွညျ့ပါ၊ ဘယျနညျးပွရှိလို့၊ သူ့ဆီကနေ သငျယူခငျြလို့ ဒီအသငျးကို ပွောငျးလာတာ ဆိုတာမြိုး မကွာခဏ ကွားနရေပါတယျ။ နိုငျငံတဈနိုငျငံမှာ ခေါငျးဆောငျပွောငျးသှားလို့ ဒီခေါငျးဆောငျနဲ့အတူတူ တိုငျးပွညျအတှကျ အလုပျလုပျဖို့ဆိုပွီး နိုငျငံရပျခွားက ပွနျရောကျလာတဲ့ ပညာတတျတှကေိုလညျး မွငျဖူးကွမှာပါ။ ဒါတှဟော ခေါငျးဆောငျဖွဈသူရဲ့ Personal brand ကွောငျ့ လူတျောတှကေို စညျးရုံးနိုငျခွငျး၊ ထိနျးသိမျးနိုငျခွငျးရဲ့ ဥပမာတှပေါပဲ၊ ဒါကွောငျ့မို့ အဖှဲ့အစညျးတဈခုကို ဦးဆောငျတဲ့ ခေါငျးဆောငျဟာ အရညျအခငျြးရှိဖို့၊ Brand image ကောငျးဖို့၊ လူတှေ လေးစားရသူဖွဈဖို့ လိုပါတယျ။ Leading by example ဆိုသလို ခေါငျးဆောငျဟာ အမွဲရှဆေ့ောငျလမျးပွ ဖွဈရမယျ။ နောကျလိုကျတှအေတှကျ စံနမူနာ ဖွဈရမယျ။ ကိုယျတောငျ မလိုကျနာနိုငျတဲ့စညျးကမျးကို ထုတျထားလို့မရဘူး။
၂။ တနျဖိုးထားမှုနဲ့ အကြိုးပွုမှု (Value & Contribution)
ဒီအဖှဲ့အစညျးမှာ ဘယျလိုတနျဖိုးထားမှုတှေ ရှိသလဲ။ ဥပမာအားဖွငျ့ Customer ကို အလေးထားတာလား၊ အမွတျနညျးရငျ နညျးပါစေ၊ ရှုံးရငျရှုံးဦးတော့ Customer တှေ အကြိုးယုတျမယျ့ကိစ်စ ဘယျတော့မှမလုပျဘူး ဆိုတာမြိုး၊ ဒီအသငျးက အနိုငျရရုံသကျသကျမဟုတျဘဲ အနိုငျမခံ အရှုံးမပေး နောကျဆုံးမိနဈထိ ရကေုနျရခေနျး ကစားတတျတဲ့ ဘောလုံးအသငျး၊ ငါတို့က အစိုးရဝနျထမျး မဟုတျဘူး၊ ပွညျသူ့ဝနျထမျး၊ ပွညျသူအဆငျပွစေဖေို့ အလုပျလုပျနတော စသဖွငျ့ ဒီလိုတနျဖိုးထားမှုတှကေ ၀နျထမျးတှကေို ကိုယျ့အဖှဲ့အစညျးအပျေါ ဂုဏျယူစပေါတယျ။
နောကျပွီး အမှနျတရားကို တနျဖိုးထားပွီး ပွညျသူ့အကြိုးကိုပဲ ကွညျ့တဲ့မီဒီယာ၊ ငှကွေေးအလှဲသုံးစား မလုပျဘဲ တကယျလိုအပျတဲ့ နရောတှအေထိ သှားရောကျကူညီပေးနတေဲ့ NGO အဖှဲ့၊ ဒါမှမဟုတျလညျး အခှနျအဆောငျဆုံး နံပါတျတဈ လုပျငနျး၊ လူမှုတာဝနျသိခွငျး (Corporate Social Responsibility) ဆိုတဲ့ ကိုယျ့လုပျငနျးနဲ့ဆကျနှယျတဲ့ လူမှုရေးလုပျဆောငျမှုတှေ လုပျတာ၊ ဒီလို ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြအတှကျ၊ ပွညျသူအမြားအတှကျ လုပျဆောငျနတောတှအေကုနျလုံးဟာလညျး ကိုယျ့အဖှဲ့ဟာ ဘယျလိုမြိုးဆိုတဲ့ပုံရိပျတဈခုကို တညျဆောကျနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
၃။ အဖှဲ့ရဲ့ ထိရောကျမှု (Organization effectiveness)
ဒါကတော့ ရှငျးပါတယျ။ အလုပျမဖွဈ၊ အလုပျတှေ မပွီးမွောကျ၊ မအောငျမွငျတဲ့ အဖှဲ့အစညျးမြိုးမှာ ဘယျသူမှ အလုပျမလုပျခငျြပါဘူး။ လုပျနရေလညျး စိတျဓါတျတကျကွှမှု ရှိမယျမဟုတျဘူး။ ဘာလို့ဆိုတော့ ဒီလိုအလုပျမဖွဈရငျ ဘယျတော့မြား ကုမ်ပဏီပွုတျသှားမလဲ ဆိုပွီး စိတျပူပနျနရေမှာကိုး။ ဆုဖလားဆှတျခူးနိုငျခြေ မရှိတဲ့ အသငျးက ဘယျလိုနာမညျကြျောကစားသမားကိုမှ ချေါလို့မရသလိုပါပဲ။ တကယျတော့ ၀နျထမျးကောငျးမှ အဖှဲ့ရဲ့လုပျငနျးတှေ ထိရောကျမှာဆိုပမေယျ့လညျး အဖှဲ့ရဲ့ လုပျငနျးတှထေိရောကျလလေေ၊ အဖှဲ့က ပိုအောငျမွငျလာလလေေ၊ တျောတဲ့သူတှကေို ပိုမိုထိနျးသိမျးထားနိုငျမှာ ဖွဈသလို၊ တခွားတျောတဲ့သူတှကေိုလညျး စညျးရုံးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
၄။ အဖှဲ့ရဲ့ ယဉျကြေးမှု (Organization culture)
မွနျမာ့ယဉျကြေးမှုဆိုတာ ဘာလဲ။ အမအေရှယျဆို အမေ၊ အဈကိုအရှယျဆို အဈကို၊ ဘယျသူမှ နာမညျကို အရငျးအတိုငျး မချေါဘူး။ လူကွီးရှကေ့ ဖွတျရငျ ခေါငျးငုံ့သှားတယျ။ ထမငျးဝိုငျးမှာ အသကျအကွီးဆုံးကို ဦးခပြွီးမှ စားတယျ။ ဒါတှဟော မွနျမာ့ယဉျကြေးမှုဆိုတာတှပေဲ။ ဒါကွောငျ့ ယဉျကြေးမှုဆိုတာ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ဘယျလိုဆကျဆံကွသလဲ ဆိုတာကို ပွသခွငျးဖွဈတယျ။ Organization culture ဆိုတာလညျး ဒါပါပဲ။ အဖှဲ့အစညျးထဲမှာ အလုပျလုပျနကွေသူအခငျြးခငျြး ဘယျလိုပွောဆိုဆကျဆံကွသလဲ။ တခြို့က မိသားစုလို ဆကျဆံတယျ။ ခွထေိုးတာ၊ မကောငျးပွောတာ နညျးတယျ။ တခြို့အဖှဲ့တှမှောက လှတျလပျတယျ။ ရုံးတကျခြိနျ၊ ဆငျးခြိနျကအစ တအားခြုပျထိနျးမထားဘူး။ ဘာလို့ဆိုတော့ လုပျငနျးသဘာဝက Creativity ဖနျတီးနျိုငျစှမျးကို ပိုလိုအပျတာမို့ ဒါမြိုးထားတာ။ တခြို့အဖှဲ့တှေ အလုပျဖွဈဖို့ကိုပဲ ဦးစားပေးတယျ။ အားလုံးက အလုပျကို တကျတကျကွှကွှ လုပျကွရတယျ။ မလုပျ မရှုပျ မပွုတျ ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ လူတှအေတှကျ ဒီအဖှဲ့မှာ နရောမရှိဘူး။ အဲဒီလိုယဉျကြေးမှု (Culture) တှကေ တကယျတော့ အဖှဲ့အစညျးတဈခုရဲ့ Brand ဖွဈသလို၊ ကိုယျ့အဖှဲ့အစညျးမှာ ဘယျလိုလူမြိုးတှပေဲ အံဝငျမယျဆိုတာကို ပွသနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။
၅။ အဖှဲ့သားတှကေို တိုးတကျဖှံ့ဖွိုးစခွေငျး (Developing the employees)
ဒီအဖှဲ့အစညျးမှာ လုပျသှားတဲ့သူက တခွားတဈနရောမှာ ပိုမွငျ့တဲ့ရာထူး ရသှားတယျ။ ဒီခေါငျးဆောငျက သူနဲ့တှဲလုပျတဲ့သူတိုငျးကို ကိုယျရညျကိုယျသှေး တိုးတကျလာအောငျ၊ ၀နျထမျးဘဝ တဈဆငျ့ထကျတဈဆငျ့ တကျလာအောငျ၊ Career progression ဖွဈလာအောငျ ပြိုးထောငျပေးနိုငျတယျ။ ဒီလိုအဖှဲ့အစညျးမြိုးဆို အလုပျဝငျခငျြတဲ့၊ လာပွီး သငျယူခငျြတဲ့ လူငယျတှအေမြားကွီး ဖွဈနမှောအမှနျပါပဲ။ ဂကျြမားပွောသလိုပဲ၊ ငယျရှယျတဲ့အခြိနျမှာ လစာ ဘယျလောကျရမလဲဆိုတာထကျ မငျးအလုပျလုပျပေးရမယျ့ဘော့ဈ ဘယျသူလဲ ဆိုတာက ပိုအရေးကွီးပါတယျ။ ဘာလို့ဆိုတော့ ငယျရှယျစဉျမှာ ဆရာကောငျးသမားကောငျးနဲ့ တှလေို့ကျတယျ၊ ကိုယျ့ဘဝကို အကွံဉာဏျကောငျးပေးပွီး လမျးညှနျပေးနိုငျမယျ့ mentor ကောငျးနဲ့ တှလေို့ကျတယျဆို ဒါဟာ ကိုယျ့အတှကျ တကျလမျးတဈခု ရသှားမှာမို့လို့ပါပဲ။
ဆောငျးပါးအဆုံးသတျအနနေဲ့ ကြှနျတျော တအားသဘောကတြဲ့ စကားလေးတဈခု ဝမြှေလိုတယျ။
အထငျကွီးလေးစားခံရမှုဟာ စှမျးအားတဈခုဖွဈတယျ။ အစညျးအဝေးတှမှော လူလေးစားခံရသူတဈယောကျ ပွောတဲ့စကား အငျမတနျသကျရောကျမှုကွီးတယျ။ အားလုံးက ခေါငျးညိမျ့တယျ။ လုပျငနျးခှငျတဈခုမှာ လူလေးစားခံရသူတဈယောကျ ပေးတဲ့အကွံ လူတကာလကျခံတယျ။ ခတြဲ့ဆုံးဖွတျခကျြ ကနျ့ကှကျသူ တအားနညျးတယျ။ နောကျက လိုကျဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈနကွေတယျ။ ဒီတဈယောကျ ပွောတုနျးက ၀ိုငျးရှုံ့ခခြဲ့တဲ့ စကားတှကေိုပဲ နောကျတဈယောကျကပွောတဲ့ ၀မျးသာအားရ လကျခုပျတီးနကွေတယျ။ ဒါတှဟော Reputation ရဲ့ ပါဝါတှပေဲဖွဈတယျ။
ကိုယျ့အဖှဲ့အစညျးနဲ့ ပတျသကျရငျလညျး ဒီလိုပါပဲ။ ခေါငျးဆောငျဖွဈတဲ့လူက ဘယျလိုလူလဲ၊ အဖှဲ့အစညျးမှာ ဘယျလိုတနျဖိုးထားမှုတှေ ရှိသလဲ၊ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ အမြားပွညျသူကို ဘယျလောကျထိ အကြိုးပွုနသေလဲ၊ ဘယျလောကျအောငျမွငျတဲ့ အဖှဲ့လဲ၊ ကိုယျ့အဖှဲ့သားတှကေို ဘယျလောကျထိ ပြိုးထောငျပေးနိုငျသလဲ ဆိုတာတှကေ ကိုယျ့အဖှဲ့အစညျးအပျေါ အထငျကွီးလေးစားမှု (Reputation) ရစမှောပါ။ ဒါကွောငျ့ အဖှဲ့အစညျးတှေ၊ ဌာနတှအေနနေဲ့ ဒီအခကျြတှကေို သခြောပွငျဆငျပွီး ကိုယျ့အဖှဲ့အစညျးရဲ့ Brand ကို သခြောတညျဆောကျထားနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။
၀နျထမျးတှကေ ဒီအဖှဲ့အစညျးကို ကိုယျစားပွုရတာကို ဂုဏျယူနတေယျ ဆိုတဲ့နဟေ့ာ ကိုယျ့အဖှဲ့ အောငျမွငျတဲ့နပေ့ါပဲ။
ညေးတို့ဖတ်ဖို့ – ၆ →